Fironana mpivarotra horonan-tsary tamin'ny 2021 | Martech Zone
Ny horonan-tsary dia faritra iray izay tena ezahako horesahina amin'ity taona ity. Vao haingana aho no nanao podcast Owen ao amin'ny The Video Marketing School ary nanosika ahy hanao ezaka fanampiny izy. Nanadio ireo fantsona Youtube nataoko vao haingana aho - na ho ahy manokana na ho ahy Martech Zone (azafady, misoratra anarana!) ary hanohy hiasa amin'ny fahazoana horonantsary tsara voarakitra aho ary koa hanao horonantsary tena izy.
Namboariko ny biraon'ny tokantrano tamin'ny taon-dasa ary nividy a Logitech BRIO Ultra HD Webcam miaraka amin'ny Ecamm Live. Izy roa dia manome sary mahatalanjona ary tena maranitra ny biraoko… ka tsy manana fialantsiny aho tsy hanao izany! Mampanantena aho fa tsy hiala amin'izany. Sarotra loatra ny manaraka ny famoahana, ny podcast, ary ny orinasako… saingy fantatro fa handray soa aho amin'ny fanaovana io ezaka io.
Antontan'isa momba ny Marketing amin'ny horonan-tsary
Misy antontan'isa matanjaka izay manohana ny ezaka amin'ny marketing amin'ny horonan-tsary:
Raha betsaka 85% amin'ny orinasa efa nampiasa marketing video amin'ny fomba iray na amin'ny fomba hafa amin'ny taona 2020. Izany up 24% vao 4 taona lasa izay.
99% amin'ny orinasa ilay vidéo efa niasa tamin'ny taon-dasa dia nilaza fa mikasa ny hanohy… ka mazava ho azy ireo mahita ny tombony azony!
92% amin'ny orinasa raiso ho toy ny ampahany manan-danja amin'ny tetikadin'izy ireo amin'ny marketing manontolo.
Karazana varotra horonan-tsary malaza
72% ny mpivarotra mampiasa famoronana horonan-tsary horonantsary manazava.
49% ny mpivarotra mampiasa famoronana horonan-tsary horonantsary fampisehoana.
48% ny mpivarotra mampiasa famoronana horonan-tsary horonantsary fijoroana vavolombelona.
42% ny mpivarotra mampiasa famoronana horonan-tsary horonantsary fivarotana
42% ny mpivarotra mampiasa famoronana horonan-tsary doka video.
Ireo fironana amin'ny horonantsary malaza:
Mitombo hatrany ny fampiasana video!
Nandeha mobile ny streaming mivantana.
Ny horonan-tsary fohy dia mitohy manjaka amin'ny sehatra rehetra.
Ny atiny ateraky ny mpampiasa dia mitarika ny firotsahana sy ny fanovana.
Noho ny fiasana an-trano sy ny areti-mandringana, ny horonan-tsary fanabeazana sy ny horonan-tsary momba ny fiofanana an-tserasera dia mitombo amin'ny fanekena sy ny lazan'ny olona.
Tamin'ny taona 2020, mitentina 9.95 miliara dolara ny fandaniana doka any Etazonia. Tombanana hiakatra 13 isan-jato izany $ 11.24 lavitrisa tamin'ny 2021 (Statista, 2019).
Ny horonan-tsary dia mitarika fiovam-po, ny 80% amin'izy ireo dia milaza fa ny ezak'izy ireo amin'ny varotra horonantsary dia nitombo ny fivarotana ary ny 83% dia nilaza koa fa mahazo fitarihana bebe kokoa izy ireo.
Ny tsena AR sy VR dia vinavina hitombo mandritra ny taona vitsivitsy sy hahatratra $ 72.8 lavitrisa tamin'ny 2024 (Statista, 2020).
Mirongatra ny vidéo azo vidiana.
eo ho eo fito amin'ny folo Ireo mpikarakara dia tsy maintsy namindra ny hetsika an-tserasera tamin'ny taona 2020 ho ampahany amin'ny fepetra hanakanana ny fihanaky ny viriosy (PCMA, 2020).
Oberlo, sehatra mahafinaritra ho an'ny mpandraharaha hianarana, hananganana ary hampitombo ny orinasan-dry zareo dropshipping ecommerce, dia nanadihady sy nanambatra ity sary feno antsipirihany ity momba ny fomba fivoaran'ny varotra horonantsary amin'ny 2021.
Midira amin'ny Orberlo maimaim-poana!
Tags: horonan-tsary arhoronantsary influencerLahatsary Marketingoberlohoronan-tsary manokanalahatsary "real-time"tantarahoronantsary mitsanganavideo marketingstatistika amin'ny horonan-tsaryfironana amin'ny horonan-tsaryvideo vr
TrueReview: Angony mora ny famerenana ary ampivoaro ny laza sy ny fahitana ny orinasanao